Animation | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Buddha Episode 37 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Upload By ၊ WatchMyanmarMovies
ဆိုဒ်ပေါ်မှာ ကြည့်ချင်သူများ ကွန်နက်ရှင် ကောင်းမှ ကြည့်နိုင်မှာပါ ကွန်နက်ရှင် နှေးသူများ အရင်ဆုံး ဒေါင်းယူ
ပြီးမှ ကြည့်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ ... ။
Buddha Episode 38 (မြန်မာစာတန်းထိုး) ကို တင်နေတုန်းမို့ မကြာမှီ လာမည် မျှော်... ။
From: ဘလော့ခရီးသည် by ညီနေမင်း
ကဏ္ဍ Animation, Movie, နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်
3D Animation ရုပ်ထွက်များနဲ့ လန်းနေတဲ့ - 3D Parallax Background v1.21 APK
အခုလည်းနောက်ထပ် Live Wallpaper အသစ်လေး တစ်ခုထပ်ပြီး တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက
အသစ်လေးဆိုတဲ့ အတိုင်းဘဲ လုံးဝကို ခပ်ဆန်းဆန်းလေးပါ။ နောက်ပြီး 3D ရုပ်ထွက် ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ ဆိုတော့ ပို
မိုက်မှာပါ။ မနေ့ ကမှ အသစ်ထွက် လာတာဖြစ် ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် လန်းလည်းဆိုတာအောက် မှာ
Screen Shoot တွေ ပြထားပါတယ်ဗျာ။
Android OS 2.1 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။
ကဏ္ဍ Android, Animation, Phone Application, Wallpapers
ကာတွန်း ရုပ်ရှင် စတင် ဖန်တီး ဖို့ရာ.....
Animation တစ်ခုမဖြစ်ခင် သိထားရမယ့် အခြေခံအချက်တွေက....
(1). Story Plan
Animation လုပ်တော့မယ် ဆိုရင်တော့ Story Plan လေး ရှိဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ မိမိ ဖန်တီးလိုတဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ကွက် တွေကို
သိနှင့်ပြီး ဖြစ်ရမယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဘက်က ဘာဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးမယ် ဆိုတာကို ပေါ့ဗျာ....နောက် ဇာတ်လမ်းဆင်ခြင်း ဆို
တဲ့ စာရွက်ပေါ် ရေးဆွဲရ ပါတယ်။ အသေးစိပ် ကျဖို့တော့ မလိုဘူး ပေါ့ဗျာ....။
(2). Character or Actor
မိမိ ဇာတ် အတွက် ဇာတ်ကောင်ကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရ ပါမယ်။ ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးကို ရေးဆွဲ ရပါတယ်။ လူ၊ ခွေး၊ ကား၊ သစ်ပင်တွေ သာမက အရာဝတ္တု တော်တော် များများကို ဆွဲရ ပါတယ်။
(3). Animation Software, Editing Software and Output
Animation လုပ်တော့မယ် ဆိုတော့ Software တွေက လိုတာပေါ့.... eg., Adobe Flash တို့လို Software မျိုးတွေနဲ့ အသုံး
ပြုလို့ ရပါတယ်...နောက်ထပ် တွေလဲ ရှိတာပေါ့ဗျာ...နောက် Editing Software လိုအပ်တယ်.. ခွေထုတ်ဖို့ အတွက် Output လုပ်နိုင်မယ့် Software တွေ လိုအပ် တာပေါ့ဗျာ....။
CorelDraw X3, X4, (or) X5 မသုံးလို လျှင်လည်း ရပါတယ်။
Adobe Illustrator (or) Adobe Photoshop Software များသုံးနိုင်သည်။
Adobe Flash CS4 (or) CS6 (or) Micromedia Flash
Adobe Premiere Pro (or) Other Video Editing
Background Image and Music
နောက်ခံ ပန်းချီကား ပုံတွေ အမျိုးမျိုးကို ဇာတ်လမ်း လိုအပ်ချက် အရ ဆွဲရပါတယ်။ အသံဖိုင် တွေကို ရှာဖွေ စုစည်း ရပါတယ်။
(4). PC Requirement
CPU - Dual Core, Core 2, i3, i5, i7
RAM - DDR 2,32 GB and Above
Graphic Card - 1 GB
Hard Disk - 100 GB and Above
(5). လုပ်ငန်းခွင် သုံးဖို့ရာ
ကာတွန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူ ပါဘူး။ ၀ါသနာ အရင်းခံ ရမှာဖြစ်ပြီး အတွေးတွေ ကွန့်မြူး တတ် ရန်
လည်း လိုအပ် ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော တွဲဖက် Software များ၊ အသုံးချ ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု တတ်ရန် လိုအပ် ပါ
Animation ပုံတွေ ရေးဆွဲ ဖို့ရာ Graphic Software တွေ ဖြစ်တဲ့ Photoshop, Illustrator, CorelDraw တို့ဖြင့် ပုံများ ရေး
ဆွဲနိုင် ပါတယ်။ နောက် တခုက ပုံတွေကို ရေးဆွဲပြီး Camera ဖြင့် ရိုက်ယူကာ Video Editing Software ဖြင့် ပြန်လည် ကူးဆက်
ရပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် စက္ကူ ပေါ်မှာပင် ရေးဆွဲကာ Scanner ဖြင့် ဖတ်ယူ နိုင်ပါတယ်။
Scanner ဖတ်ပြီးသား ပုံကို Software တစ်ခု ခုဖြင့် ပြန်ထပ် ဆွဲနိုင် ပါတယ်။ နောက် တခုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလွယ် ၀ယ်ယူ နိုင်တဲ့ Drawing Pad (Graphic Tablet) လေးပါ ရှိမယ် ဆိုရင်တော့ ပြီးပြည့်စုံ ပြီပေါ့ဗျာ။
နည်းပညာ ဗဟုသုတများ တိုးပွား ကြပါစေ....။
မြန်မာ ဘလော့ဂါများ ဆုံဆည်းရာ မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
ကဏ္ဍ Animation, နည်းပညာဆောင်းပါး
ဘလော့ပိုင်ရှင်များ မိမိရဲ့ ဘလော့ကနေ ချစ်သူများနေ့ကို လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံလှလှလေးတွေနဲ့
ကြိုဆိုချင်သူများ အတွက် ချစ်သူများနေ့ သင်္ကေတ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Animation, ဓါတ်ပုံ
Google Image Searchတွင် animated GIFs formatပုံများကို Filterဖြင့်ရှာနိုင်ပြီ
ဓါတ်ပုံဖိုင်အမျိုးအစားများစွာရှိသည့်အနက်မှ animation လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များဖြင့် ဖန်တီးထားသော
GIF format (Graphics Interchange Format) ပုံများကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် Google
Image တွင် စတင်ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် search result မှာပါ animated လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို တိုက်ရိုက် မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊
GIFs အမျိုးအစား ပုံများကိုရှာဖွေရန်အတွက် Google Image Search သို့သွားခါ Search tools
ကို click နှိပ်ခါ Any type တွင် "animated" ဟူ၍ ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Google Image Search သို့သွားရန်
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, March 24, 2013
ကဏ္ဍ Animation, Google, လမ်းညွှန်
Xara-3D.6.0 နဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ စာလုံလေးတွေဖန်တီးရအောင်
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, July 08, 2012 No comments:
new pictures and animations with the names of (2011) GIF
Before you the best new pictures and animations with names such as women and men.
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, January 02, 2012 No comments:
ကဏ္ဍ Animation, Photos